Mifampiresaka amin’ny fampiasàna ny IKON ho an’ny maso · Global Voices teny Malagasy
IKON - ilay fiteny mampiasa icons
Voadika ny 06 Oktobra 2021 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , English
Ahoana moa raha icons no ifampiresahantsika amin'ny hoavy mba hanehoan-javatra sy fotokevitra? Sarisary ny icons, matetika isika no mampifamatotra azy amin'ny fahaizamamorona. Ny fandefasana hafatra dia mifamatotra amin'ny eritreritra manaraka rafipisainana satria ilaintsika ny misaina momba ny gramera, raha ny fampiasàna icons kosa indray dia fanazàrana ny atidohantsika hahay hamorona. Araka izany, rehefa mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny icons, dia sady fizàrana hahay hamorona no fanarahana rafipisainana no ataon'ny atidohantsika.
Misy fikambanana iray ao Soisa, KomunIKON, miketrika karazana fifampiresahana ampiasàna ny maso mba hahafahan'ireo olona avy amin'ny fiteny samihafa hifampiresaka tsy misy olana. IKON no iantsoan-dry zareo azy io. Adikan'izy io ho icons ny lahatsoratra mba ho azon'ireo mpampiasa halefa ho an'ny mpampiasa hafa. Ny icons vokarin'ny KomunIKON dia azo ampiasaina na aiza na aiza ilàna manoratra hafatra, na toy ny inona na toy ny inona ireo kazarana handray azy, eny fa na ireo olona manam-pahasahiranana aza, toy ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra na manana fahasembanana.
Filôzôfia sy taridàlana tamin'ny haibika
Iraisampirenena: ny icons dia tokony ho mora takatr'ireo firenena sy fiteny samihafa.
Mampiaty: ny icons dia tokony hanaja ny fahasamihafàna, toy ny maha-lahy na maha-vavy, ny fironana ara-pananahana, sns…
Mijery ny maha-olona: Hita anaty icons marobe ny fotokevitra hoe “olombelona”, toy ny hoe Izaho, Ianao, Dada, Neny, sns…
Tsy misy diso: ny icon tsirairay dia tokony hanana dikany voafaritra tsara, toy ny ao anaty rakibolana. Ampitahao ny hoe “mihaino” sy ny “mandre”.
Feno: Ireo dika mavesa-danja rehetra dia tokony ho afaka aseho amina icon 1 raha kely indrindra.
Tsy voasivana: tsy misy fandraràna momba ny icons mivantambantana, miresaka fananahana, mahery setra ary maniratsira, toy ny amin'ny fiteny tena izy ihany.
Mifanaraka tsara: Raha misy icon iray manana dika iray toy ny an'ny Y ao anatin'ny icon Z, dia tokony tazonin'ny icon X io dika mitovy amin'i Y io any anaty cion tsirairay.
Mangarahara: ny icons dia tokony ho mora takatry ny olona rehetra araka izay tratra.
Natao ho an'ny rehetra: ny icons dia anaovan'ilay vondrompiarahamonina andrana amin'ny alàlan'ny fitaovana iray antsoina hoe “iconometer”, novokarin'ny Oniversity ao Zeneva.
Fehezanteny natao ohatra
Ireto misy fehezanteny maromaro novokarin'ny KomunIKON. Azafady, ataovy ao an-tsaina fa fiteny tena manana fahafahana hiovaova ny IKON, tsy misy fitsipika henjana ilaina hianarana, na iza na iza dia afaka mampiasa azy araka izay tiany, rehefa takatr'ilay andefasana azy fotsiny.
Mandefa oroka maro (ho) anao aho
Ao anatin'ity fehezanteny amin'ny fiteny anglisy ity, misy zavatra roa (“izaho” sy “oroka”). Noho io antony io, nampianay mpampiankina “to” (“ho”) eo alohan'ny “ianao”.
2. Fiainana manontolo anatin'ny alina iray
Fiainana manontolo anaty alina iray
Io no lohatenin'ny sarimihetsika italiàna iray novokarin'i Robert Bresson (1967). “Manontolo” dia mifanohitra amin'ny hoe “antsasany, vitsy an'isa na ny ankamaroany”. “Fiainana” dia mifanohitra amin'ny hoe “fahafatesana”. “Anaty” dia mifanohitra amin'ny hoe “ivelany”. “Alina” dia mifanohitra amin'ny hoe “antoandro”.
3. Haingana, avo, matanjaka kokoa
Haingana,avo, matanjaka kokoa
Noforonina ireo icons ireo hankalazàna ny fandresen'i Italia nandritra ny Lalao Olaimpika tanatina sokajim-panatanjahantena 3. Asehon'ilay sary ny dikany amin'ny fiteny Latina sy Italiàna, ny dikany amin'ny fiteny Malagasy dia “Haingana, avo, matanjaka kokoa”.
Na misoratra any Soisa aza, hita ao anatin'ny ekipan'ny KomunIKON ireo olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, avy amina firenana samihafa, toa an'i Italia, Frantsa, Alemàna, Rosia, Senegaly, Espaina, Ekoatora, Indônezia, Panamà, Ogandà, India, Timor Atsinanana, sns… Ao amin'ny KomunIKON no amakiana misimisy kokoa momba io tarika mahaliana io sy ny IKON.
Tantaran'ny Soisa farany
13 Avrily 2021Afrika Mainty
10 Novambra 2019Afrika Mainty
31 Desambra 2018Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana